हेर्न मात्रै सय रुपया तिर्ने हो हजार तिरे जंगलमा छिर्नेहो! यस्तो गित गएर के भन्न खोजेकी हुन् ज्योतिले हेर्नुहोस भिडियो ! - Enepalese.com
हेर्न मात्रै सय रुपया तिर्ने हो हजार तिरे जंगलमा छिर्नेहो! यस्तो गित गएर के भन्न खोजेकी हुन् ज्योतिले हेर्नुहोस भिडियो !
इनेप्लिज २०७५ चैत १ गते ११:१६ मा प्रकाशित
लोक गायनबाट अभिनयमा जम्प गरेकी कलाकार ज्योती मगर कामले भन्दा धेरै पोसाकका कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन् । उनले म्यूजिक भिडियोदेखि विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा लगाउँने पहिरनले उनलाई अधिकांश समय विवादमा तानिरह्यो । तर, उनलाई यस्ता खाले विवादले कुनै असर गरेको देखिदैन् । उनी समय-समयमा विभिन्न पोजका कामुक तस्विरहरु फेसबुक पेजमा अपलोड गरिहन्छिन् ।
ज्योति मगरलाई आम दर्शकले अश्लील गीत गाएको आरोप लगाउने गरेपनि उनी भने आफ्ना कुनै पनि गीतमा अश्लीलता नभएको बताउँछिन् । ‘मेरा कुनै गीत पनि अश्लील छैनन् । मान्छेको दृष्टिकोण नै त्यस्तै छ,’ ज्योति समाजले आफ्ना गीतलाई अश्लीलताको आरोप लगाएको बताउँदै थप्छिन्, ‘मान्छेलाई त्यस्तै गीत चाहिएको छ तर उहाँहरु गीत सुनेर आनन्द लिने तर, नगाइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। गुल्मीको शान्तिपुर भएको कार्यक्रममा तल भिडियोमा हेर्नुस ज्योति मगरको र बैकुण्ठ महतको दोहरी घम्सा घम्सी सुनी सके पछी प्रतिक्रिया आफै दिनु होला भन्न चाहन्छौ।